January 2009 | Myanmar Astronomy
About "With IMAGINARY Spaceship"
Posted by ဆောင်း at 4:01 AM0comments
ကျွန်မရဲ့ အတွေးယာဉ်လေးနဲ့ အတူ ဆိုတဲ့ အခန်းဆက်ပို့စ် လေးဟာ နည်းပညာ တွေကို စိတ်ဝင်စားစရာ ဇတ်လမ်းတွေနဲ့ နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူတွေရော မကျွမ်းကျင်သူတွေပါ နားလည်လွယ်အောင် ကျွန်မ ဖြစ်ချင်ခဲ့တာတွေနဲ့ ရောစပ် ရေးသား ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နည်းပညာရပ်တွေဟာ စိတ်ကူးယဉ်သိပံဇတ်လမ်းပညာအတု မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မ ရေးထားတဲ့ တချို့ အချက်တွေဟာ ဇတ်လမ်းအရ နိုင်ငံနဲ့ နေရာ အစစ်အမှန်ကို ညွှန်ရေးလို့ မရတဲ့ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအဖြစ် အစားထိုးရေးသားခြင်း သာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် မူရင်း စာများကို စာမှီးအဖြစ် ညွှန်ထားသဖြင့် ကိုယ်တိုင် ဖတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
စာဖတ်သူများ အနေဖြင့် ကျွန်မပို့စ်မှာ ပါသော နည်းပညာ တချို့ကို ကန့်ကွက်လို ဆွေးနွေးလို အကြံပေးလို အသေးစိတ်သိလို ပါက saundoo@gmail.com ဆီသို့ စာရေး မေးမြန်းငြင်းခုံနိုင်ပါတယ်။
အတွေးယာဉ်လေးနဲ့ အတူ 2
Posted by ဆောင်း at 8:19 PM Labels: ဆောင်း0comments
With IMAGINARY Spaceship - အပိုင်း၂
အာကာသထဲထွက်ဖို့ အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ဖို့ အများကြီး ထဲ့သွင်းစဉ်းစားရပါတယ်။ ပြောရရင် အစစ အရာရာ မသိတာ တွေကို စမ်းသပ် ရှာဖွေလေ့လာ စရာ အများကြီးပါဘဲ။
အာကာသ ပညာရှင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရပြီဆိုရင် အာကာသထဲမှာ တွေ့ကြုံရမဲ့ အခြေအနေတွေ အခက်အခဲ တွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှု့တွေကို ကြိုတင် မှန်းဆပြီး လေ့ကျင့်ရပါတယ်။ အာကာသထဲသွားတယ် ဆိုတာ ကမ္ဘာ့အပြင်ဘက် ထွက်တာလေး တစ်ခုထဲ မဟုတ်ပါဘူး။
- နိုင်ငံတစ်ခုလုံး နိုင်ငံပေါင်းစုံအားလုံး ပါဝင်နေတဲ့ တကမ္ဘာတခုလုံးရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို မှတ်တမ်းတင်လို့ ရနေပါတယ်။ ကမ္ဘာအပြင်ဘက်မှာ ရှိနေတဲ့ မသိနိုင်သေးတဲ့ စင်္ကြာဝဌာ နှင့် ဂြိုလ်များ ကြယ်တာရာများ ကြယ်တံခွန်များ လများ အစရှိတာတွေ ကိုလည်း ထောက်လှမ်းလေ့လာ နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ကမ္ဘာအပြင် အခြားသော နေရာတွေမှာ သက်ရှိသတ္တ၀ါ ရှိနိုင် မရှိနိုင် လေ့လာဖို့ ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ တခြားဂြိုလ်တွေရဲ့ သက်ရောက်မှု့ကြောင့် ကမ္ဘာမှာ ပြောင်းလဲမှု့တွေ အကြောင်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
- သို့အပြင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ သာမာန် လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်တွေ သမရိုးကျ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ တနည်းအားဖြင့် သက်ရှိသက်မဲ့ အရာတွေရဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပုံမှန် ဖြစ်ပျက် နေမှု့ဟာ အာကာသ ထဲ ရောက်သွား တဲ့အခါ ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်တယ် ဘယ်လိုကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးရရှိနိုင်မလဲ ဆိုတာ စမ်းသပ်နေဆဲပါ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သုတေသနတွေ အာကာသထဲမှာ စမ်းသပ်ရင် ဘယ်လို ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသုံးဝင်နိုင်မလဲ ဆိုတာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
- ပုံမှန် သဘာဝ ဇီဝဓါတ်တွေ ကမ္ဘာအပြင်ထွက်ပြီး ကမ္ဘာထဲ ပြန်ဝင်လာရင် ဘယ်လို ပြောင်းလဲမှု့ရှိသလဲ ဆိုတာ စမ်းသပ်နေပါတယ်။ ပြောင်းလဲမှု့ရဲ့ အကျိုးအမြတ် တချို့တွေ ကို ယ္ခု လက်ရှိ ခံစားနေကြပါတယ်။
- ဖြစ်နိုင်ရင် ကမ္ဘာကြီး ပျက်ခဲ့သော် ဘယ်နေရာကို ထွက်ပြေးနိုင်မလဲ တခြား ဘယ်ဂြိုလ်မှာ ပြောင်းရွှေ့နေနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ အချက် တွေပါ လေ့လာနိုင်ပါသေးတယ်။
- တကယ်လို့များ စစ်ကျူးကျော်ခံရရင် ကြိုသိနိုင်ဖို့ လျှို့ဝှက်စုံစမ်းမှု့တွေကို အာကာသယာဉ်တွေ စက်တလိုက်တွေက တဆင့်ဓါတ်ပုံရိုက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
-ဘယ်နေရာမှာဘယ်လို သယံဇာတတွေ ရာသီဥတုအခြေအနေ အစရှိသမျှကို ကမ္ဘာ့အပြင်ဘက်ကနေ ထောက်လှမ်းလို့ရနေတဲ့ အတွက် အာကာသယာဉ်ဟာ အလွန်မှ အရေးကြီးတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် တွေ ဖော်ထုတ်ရာ နေရာ ဖြစ်နေပါတယ်။
- လူသားတွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အသုံးပြုနေတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးတွေကို ပိုမိုလွယ်ကူ မြန်ဆန်အောင် လေ့လာစမ်းသပ်ချက်တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကမ္ဘာ့အပြင်ဘက်ထွက်ပြီး လေ့လာရမဲ့ အာကာသပညာရှင်တွေဟာ ကိုယ့်ဆိုင်ရာနယ်မှာ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ရပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်တတ်ကျွမ်းတဲ့ အကြောင်းအရာ အပြင် ဘက်စုံနီးပါး သိတတ်ထားရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လူများများ မတင်လွှတ်နိုင်တဲ့အတွက် လူတစ်ဦးတည်းက လိုအပ်တဲ့ လူ၁၀ယောက် ရဲ့ အတတ်ပညာ အသိပညာလောက် ကို ယေဘူယျနီးပါး တတ်ထားပါမှ ကြိုတင် ကာကွယ်မှု့ တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါမယ်။
ဖြတ်ထိုးဥာဏ်သုံးနိုင်တဲ့သူ စိတ်ရှည်တဲ့သူ မှတ်ဥာဏ်ကောင်းတဲ့သူ စိတ်ဓါတ် ရေးရာ ကြံခိုင်တဲ့သူ ဖြစ်မှသာ လူနည်းနည်းနဲ့ ကြဲကြဲဝိုင်းရတဲ့ အာကာသ ခရီးမှာ အရွေးခံရပါမယ်။
သို့အတူ ပညာရှင်တွေဟာ အသက်ဘေးနဲ့လဲ စက္ကန့်ပိုင်းအကွာမှာ နေနေရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အခုထိ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု့တွေနဲ့ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု့တွေဟာ ဘယ်လိုမှ အစားထိုးလို့ မရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု့တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ နည်းပညာပိုင်းဘဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကျဉ်းကြပ် လှတဲ့ အာကာသယာဉ်ထဲက အဖွဲ့သားတွေနဲ့ အပေး ယူမျှဖို့ လိုပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ အပြင်ဘက်မှာ တွေ့ကြုံရမဲ့ အခြေအနေတွေ အခက်အခဲတွေကို ခံနိုင်ရည် ရှိဖို့ အတွက် ကျန်းမာရေး အတော် ကြံ့ခိုင်တဲ့ သူဖြစ်ဖို့လိုပါသေးတယ်။
ရက်အတန်ကြာတဲ့ အထိ ကမ္ဘာ့ ဆွဲအား မရှိပေမဲ့ ဂြိုလ်တွေရဲ့ ဆွဲငင်အား အနည်းငယ် ရှိပြီး လွှင့်မျှော နေရတဲ့ လေဟာနယ်ထဲက ပတ်ချာလည်နေမှု့တွေ မတူညီတဲ့ ပြောင်းလဲမှု့တွေကို စိတ်ဓါတ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ ခံနိုင်ရည် ရှိနိုင်မဲ့ သူလည်း ဖြစ်ရပါအုန်းမယ်။ သယ်ဆောင်နိုင်မဲ့ ပါလာတဲ့ အစားအသောက်ကိုလည်း တာရှည် ခံအောင် တနေ့တာ သတ်မှတ်တဲ့ အစားအသောက်ကိုလည်း တင်းတိမ်နိုင်အောင် လေ့ကျင့်ရပါတယ်။ တဲ့တဲ့ပြောရရင် အစားအသောက်မှာ ချေးမများရပါဘူး။ သယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ရေပမာဏဟာ ကန့်သတ်ချက် ရှိတဲ့ အတွက် တချို့ရေတွေဟာ ပြန်လည် အသုံးချရ ပါတယ်။ မရွံ့ရှာဘဲ သိပံနည်းကျ သန့်စင်ထားတဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ ရေ လို့ သတ်မှတ်နိုင်ရပါမယ်။ အရာရာကို အမြင်အားဖြင့် ခန္တီသဘောနဲ့ လက်ခံ စားသောက်နေထိုင် နိုင်ရပါမယ်။
ဒီလို ထိန်းချုပ်မှု့တွေ များလွန်းလှတဲ့ အတွက်ကြောင့် အာကာသသိပံပညာရှင် ဖြစ်ဖို့ စိတ်ရှည်တဲ့ သူကိုသာ ရွေးရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ အပြင်ဘက်မှာ အပူအအေး မမျှတပါဘူး။ သံလိုက်စက်ကွင်း လျှပ်စစ်စက်ကွင်း နဲ့ မသိနိုင်တဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ စက်ကွင်းတွေ ဘေးအန္တရယ်တွေဟာ ထိပ်တိုက် ကြုံတွေ့ရမှာ ၁၀၀% ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အာကာသသိပံပညာရှင်တွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်ပြန်ရောက်လာရင် အဲဒီ အန္တရယ်တွေရဲ့ အကျိုးဆက်ကို ခံစားရမှာပါ။ ပြောရရင် မြန်မြန်သေဖို့ ကြိုတင် လက်မှတ် ယူထားသလိုပါဘဲ။
ကျွန်မတို့ အတွက်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်မှု့ အတွက် သံဓိဌာန်ချထားတဲ့ အတိုင်း ဖြစ်လိုရာ ဖြစ်စေတော့ အသက်ပါစွန့်မယ် ဆိုပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ နောက်မဆုတ်တမ်း စိတ်ဓါတ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ ရှေ့ ဆက်လျှောက်မဲ့ သူတွေပါဘဲရှင်....
နောက်ပိုင်းပို့စ်တွေမှာ အထက်က တင်ပြထားတဲ့ သုတေသနလုပ်ငန်းတွေရဲ့ အဖြေရခဲ့သော အဖြေမရသေးသော ရလာဒ်တွေကို အနည်းငယ်စီ တင်ပြသွားပါမယ်
Thank you for visiting to my blog and enjoy exploring with my IMAGINARY spaceship.
With IMAGINARY Spaceship - အတွေး ယာဉ်လေးနဲ့ အတူ
Posted by ဆောင်း at 8:13 AM Labels: ဆောင်း2comments
မှတ်ချက်။ ။ ယခုရေးတဲ့ ပို့စ်ကတော့ ညီမလေး ထွေး က မမရယ် စိတ်ကူးယဉ်ပေးပါ ဆို လို့ ရေးတဲ့စာပါ။ ကျွန်မ အမှန်တကယ် စိတ်ကူးယဉ် ခဲ့မိပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ မဖြစ်နိုင်တော့တာ ကြောင့် စိတ်ကူးကို စိတ်ကူးထဲမှာ ဘဲ ထားခဲ့ရ တဲ့အတွက် ကျွန်မ အတွက် မှတ်တမ်း မဟုတ်ရင်တောင် မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်ပါရစေလို့.. ....
မြန်မာ အာကာသ သိပံ ဌာန.............
ဒေါက်တာခွန်း .. ဘာတွေ တွေးနေတာလဲ. မျက်မှောင်ကြုပ်လိုက် ပြုံးလိုက် တည်လိုက်နဲ့..။
ဟုတ်တယ် မဆောင်းရေ... ကျွန်တော် စစ်တမ်းတွေ အားလုံးကို အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားနေတယ်။ ကျွန်တော့် အနစ်နစ်အလလက ရည်မှန်းတာကို ပြည့်ချင်တယ်ဗျာ။
ဒေါက်တာခွန်းရေ.. ဒါကတော့လေ... အားလုံးကတော့ အကောင်းဆုံးကို ရည်မှန်းတာဘဲ။ ရသည် ဖြစ်စေ မရသည် ဖြစ်စေ ကြိုးစားရမှာ က ကျွန်မတို့ တာဝန်မဟုတ်လား။
သြော် ဘာလိုလိုနဲ့ ကျွန်မတို့ တွေ ပွဲဝင်တင့် ဖို့ သင်တန်းတက်နေရတာ ၃နစ်ကျော်လာပါပကော..
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နစ်ခွဲကာလ အတိတ်အစဉ် ကို ပြန်လည် သတိရ သွားမိပါတယ်။ ကျွန်မ အလုပ်လုပ်တဲ့ ဌာနက ဆရာ တစ်ဦးက သတင်းကောင်းလေး တခု သယ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ နံရံကပ်သင်ပုန်းမှာ ကပ်ထားတဲ့ သတင်းလေး တစ်ခုပါ။ အာကာသသိပံပညာရှင်များ ခေါ်ယူနေကြောင်း သတင်းကောင်း ပါ။
လျှောက်လွှာထဲမှာ ပါတာက တော့
အာကာသ သိပံပညာရှင်ဖြစ်ဖို့ အတွက်....
အဆင့်မြင့်မြင့် ဂရိတ်နဲ့အောင်ရပါမယ်။ အနည်းဆုံး ဘွဲ့ တစ်ခုရရှိထားရပါမယ်။ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့၊ ဇီဝသိပံဘွဲ့၊ ရူပသိပံဘွဲ့ ၊ ဆေးပညာ နဲ့ သင်္ချာဘွဲ့ ရထားတဲ့သူတွေသာ လျှောက်ခွင့်ရှိပါမယ်။ ဘွဲ့လွန် မဟာ၊ဒေါက်တာ ဘွဲ့ ရထားသူများ ပိုအခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ သို့သော်.. အောက်ပါ ဘွဲ့များကိုတော့ ဆက်နွယ်မှု့ရှိပေမဲ့ လျှောက်ခွင့်မရှိ ဖယ်ထုတ် ထားပါတယ်။
- မြန်မာနာဆာမှ ရူပသိပံ အာကာသ သင်တန်း သို့မဟုတ် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ ရူပလေယာဉ် သင်တန်း အောင်မြင်သူဖြစ်ရပါမယ်။
-အသက် ၂၇-၃၇နစ် အတွင်း
- ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရပါမယ်။
- မှတ်ဥာဏ်ကောင်းသူ၊ အလုပ်ကို အာရုံစိုက်လုပ်နိုင်သူ ဖြစ်ရပါမယ်။ ( ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အာကာသထဲမှာ အရာအားလုံးဟာ လေထဲလွှင့်မျှောနေသလို ပတ်ချာလည်နေနိုင်တဲ့အတွက် ခေါင်းမူးပြီး ဘာမှ အာရုံ မစိုက်နိုင် အလုပ်မလုပ်နိုင်ဖြစ်မှာ စိုးလို့ပါဘဲ။ အတော် အကြမ်းခံနိုင်ရည်ရှိသူ ဖြစ်ရပါမယ်။)
- ရန်လိုသူ၊ စိတ်ဒေါသကြီးသူ၊ စိတ်အားငယ်သူ လုံးဝ လက်မခံပါဘူး။ (အာကာသထဲသွားနေတုန်း မိသားစုကို လွမ်းတာကို ရှေ့တန်းမတင်စေရ။ အာကာသယဉ် ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ လွင့်မျှောနေတဲ့ အဖွဲ့သားတွေနဲ့ ရန်မဖြစ်စေရ။ )
- အုပ်စုအဖွဲ့ နဲ့ အပေးအယူမျှ ကူညီ လုပ်ကိုင်တတ်သူ ဖြစ်ရပါမယ်။
- သိပံပညာနှင့်ပတ်သက်၍ မိမိ လုပ်ကိုင်နေသော ပညာနယ်ပယ်ကို အသေးစိတ် တတ်ကျွမ်းသူ၊ ကွက်ကျော်မြင်သူ၊ မှန်းဆ လုပ်ကိုင်တတ်သူ ဖြစ်ရပါမယ်။
အာကာသ သိပံပညာရှင်မှာ ၄နေရာ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်
Commander/pilot အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ၊ အာကာသယဉ်မှုး
Mission specialist ဆက်သွယ်ရေးပညာရှင်
Payload specialist အာကာသယာဉ်ပညာရှင် တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှုး အဖြစ်ကတော့ ယာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာ၊ အဖွဲ့သား နဲ့ ဆက်သွယ်ရေး အားလုံးကို တာဝန်ကြီးစွာ ယူထားရသူပေ့ါ။ လေယာဉ်မှုး ကတော့ ဆက်တလိုက်ဂြိုလ်တု တပ်ဆင်ဆက်သွယ်မှု့ နဲ့ အာကာသယာဉ် တစ်ခုလုံး လုံခြုံရေး စက်ပစည်းများ မချို့ယွင်းရေး က အစ တာဝန်ယူရပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရေး ပညာရှင်ကတော့ အုပ်ချုပ်ရေးမှုး၊ လေယာဉ်မှုးနဲ့ အတူ ယာဉ်စက်ပစည်း ထိမ်းသိမ်းရေး၊ အာကာသတွင်း လမ်းလျှောက်ပြီးလေ့လာရေး သုတေသနလုပ်ဆောင်ရေးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အာကာသယာဉ် ပညာရှင်ကတော့ ဆက်သွယ်ရေးပညာရှင်အတွက် အာကာသယာဉ်အတွင်းမှ ပံ့ပိုးပေးရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်။ သူက သိပ်အရေး မပါလှပါဘူး။
- ဂျက်လေယာဉ် ကို အနည်းဆုံး ၁၀၀၀ နာရီ မောင်းခဲ့ဖူးရပါမယ်။ ခရီးသယ်တင် လေယာဉ်ကိုလည်း မောင်းဖူးရပါမယ်။
- မျက်လုံး အမြင်ကောင်းသူဖြစ်ရပါမယ်။ ၂၀-၇၀ အကွာအဝေးမြင်ကွင်း ကို တိကျ ပြတ်သားစွာ မြင်သူဖြစ် ရပါမယ်။ သို့မဟုတ် မျက်လုံးတစ်ဖက်စီ ၂၀-၂၀ မြင်ကွင်းကို မြင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။
- သွေးဖိအားနုန်း ထိုင်သည့်အချိန်တွင် တိုင်းသော ပမာဏ၁၄၀-၉၀ ရှိရပါမယ်။
- အရပ်အမောင်း ၆၄ -၇၆ လက်မ အတွင်းရှိရပါမယ်။
ဆက်သွယ်ရေး ပညာရှင် အတွက်လိုအပ်ချက်
- လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရိုးရိုးဘွဲ့ဖြစ်လျှင် ၃နစ်။မဟာဘွဲ့ဖြစ်လျှင် - ၁နစ်။ ဒေါက်တာဘွဲ့ ဖြစ်ပါက - ၃နစ်။
- မျက်လုံး အမြင်ကောင်းသူဖြစ်ရပါမယ်။ ၂၀-၂၀၀ အကွာအဝေးမြင်ကွင်း ကို တိကျ ပြတ်သားစွာ မြင်သူဖြစ် ရပါမယ်။ သို့မဟုတ် မျက်လုံးတစ်ဖက်စီ ၂၀-၂၀ မြင်ကွင်းကို မြင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။
- အရပ်အမောင်း ၅၈.၅ -၇၆ လက်မ အတွင်းရှိရပါမယ်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှုးနဲ့ အာကာသယာဉ် ပညာရှင်အတွက်က အာကာသယာဉ်မှုး လိုအပ်ချက် အတိုင်း ဖြစ်ပေမဲ့ အရပ်အမောင်းကို သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။
လျှောက်လွှာ ပိတ်ရက်ရောက်တဲ့ အထိ လျှောက်လွှာပေါင်း သောင်းနဲ့ချီ တဲ့ အထဲမှာ ကျွန်မ ရဲ့ လျှောက်လွှာလေး က အပါအ၀င်ပေ့ါရှင်။ ကျွန်မမှာ ရက်ပေါင်းများစွာ မျှော်လင့်ကြီး ကြီးစွာနဲ့ စောင့်စား ခဲ့ရ ပါတယ်ရှင်။
ရွေးချယ်သူတွေအနေနဲ့ က အတော် စိစစ်ရွေးချယ်ရတဲ့ အတွက် အချိန်ပေးရပါတယ်။ တစ်ရက်ကို လျှောက်လွှာ ၂၀စောင် ဖတ်တယ်ဘဲထား အစောင်ပေါင်း ၉၉၉၉၉ လောက်ရှိတဲ့ လျှောက်လွှာတွေ ဖတ်ဖို့ လနဲ့ချီ ကြာတာ မဆန်းပါဘူးရှင်..